VIDEO. Marka Yann Moix uu kula taliyo Laurent Ruquier of - TELES RELAY
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE »VIDEO. Markii Yann Moix uu kula taliyo Laurent Ruquier
VIDEO. Markii Yann Moix uu kula taliyo Laurent Ruquier
Waxay ahayd kaftan aad u badan. Sabtida 30 Maarso Ma aynaan been sheegin, Laurent Ruquier isku dayay kaftan cusub mid ka mid ah mowduucyada uu jecel yahay: da'da Brigitte Macron. Iyo markii uu abuuray raaxo halkii uu ka qoslayn lahaa qulqulka, oo ay ku jirto in la wareego Christine Angot, soo-saaraha Faransiiska 2 ayaa ugu yaraan heli doona taageerada qof, Yann Moix. Dhanka Terrence ee Sabtida this April 6, polemistist wuxuu siiyay saaxiibkiisa dahabiga ah ee saaxiibkiis, wuxuuna siiyey talooyin aad u qiime badan munaasabadan.
"My Lawrence qaaliga ah, si daacad ah, marka xigta aad rabto inaad kaftan ku saabsan da'da dumarka, i soo wac", sidaas u daa Yann Moix, sidaas awgeed isagoo tixraacaya hadaladiisa on haweenka ka weyn sanadaha 50 bishii Janaayo, wareysi lala yeeshay Marie Claire. Hadalkiisa, ayuu ku fashilmay in uu khilaafkan ka qaato, hadda, badanaa jilaa.
"Sababtoo ah markaan jidka marayo iyo haweeney ka weyn sanado 50 i eegto, Waxaan dareemayaa in waqtigu marayoWaxay igu eedeeyaa wakhtigaas iyo sanadkaa ", ayuu ku daray jilaa, ka hor inta uu sheegay in, in "Dhexdhexaadinta dumarka ka weyn sanadka 50", waxaan u wacnaa Salman Rushdie, Qoraa Ingiriisku wuxuu tixgeliyey astaamaha halganka xorriyadda hadalka.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.closermag.fr/people/video-quand-yann-moix-conseille-a-laurent-ruquier-de-l-appeler-avant-de-faire-un-954037
Ka dib Black K iyo Elown waa hogaamiyahooda labaad ee ay u arkaan farxada guurka
Celine Dion: Patrick Sebastien wuxuu xirfadiisa ciyaareed ku soo bandhigay Faransiiska (fiidiyoow)